admin – Doorashooyinka
War-saxaafadeed: Hawlaha u qabsoomay Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee Heer Federaal
Muqdisho (1da Diseembar, 2020): Shirkan Jaraa’id waxaan u qabannay inaan ku iftiiminno waxyaabihii u qabsoomay Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee heer Federaal oo labadii toddabaad ee u dambeysay shirar joogta ah kulahaa Hotel Decale ee magaalada Muqdisho. Wuxuu guddigan ka ...
Cabaas Maxamed Axmed
Murashax Xildhibaan – Cabaas Maxamed Axmed Wuxuu ku dhashay waxna ku bartay magaalada Muqdisho. Waa indheergarad Aqoonyahan ah, ka soo jeeda qoys diinta lagu yaqaan, waa nin dhallinyaro ah aad u jecel iskaashiga iyo horumarka, wuxuu waqtigiisa intiisa badan ku ...
Cali Maxamed Maxamuud (Joqombe)
Murashax Xildhibaan – Cali Maxamed Maxamuud (Joqombe) Murashax Xildhibaan Cali Maxamed Maxamuud (joqombe), wuxuu ku dhashay deegaanka Gidheys, ee ka tirsan Degmada Cadaado ee Gobolka Galguduud, sanadkii 1965, waxbarashadiisii Hoose/Dhexe ku soo qaatay Gobolka Galgaduud. Waxbarashadiisa Jaamacadeed wuxuu inta ...
25 Musharrax ayaa u tartamay Madaxweyne 2012
Guddiga doorashada madaxtinimada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay liiska dadka u tartamaya doorashada Madaxweynaha, kadib markii ay gabagabeeyeen qabashada araajida. Guddigu waxa ay sheegeen in muddo hal saac ah ay ugu dareen xubnaha araajida soo celinayay. Waxa ay sheegeen in ay ...
Prof. Shariif Sh. Cismaan
Murashax Xildhibaan – Prof. Shariif Sh. Cismaan Prof. Shariif Sh. Cismaan, waa aqoonyahan muddo ku soo jiray waxbarashada, wuxuu waxbarashadiisii inteeda badan ku dhameeyay dalka, halka shahaadooyinkiisa Materka iyo PhD ku soo qaatay dalka Maraykanka. Prof. Shariif wuxu haystaa ...
Maryan Axmed Geeddi
Musharax Xildhibaan – Maryan Axmed Geeddi Maryan Axmed Geeddi, waxay ka mid tahay bahda Warbaahinta 10 sano ugu danbeeyey waxay ka shaqeeynaysay Warbaahinta Dalka, waxay wax ku baratay Dalka, waa qof jecel inuu Dalka horumar wanaagsan gaaro, waxay kaloo aad ...
Musharax Xildhibaan Dr. Xuseen Cabdi Cilmi
Musharax Xildhibaan – Dr. Xuseen Cabdi Cilmi Dr. Xuseen Cabdi Cilmi, waa aqoonyahan sharci yaqaan ah haysta shahaadada PHD, wuxuu wax ku soo bartay Dalalka Suudaan iyo Masar, wuxuu ku takhasusay Qaanuunka Caalamiga, wuxuu soo noqday Guddoomiyaha Maxkamadda Sare, wuxuu ...
Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle (Jaabiri)
Murashax Xildhibaan – Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle (Jaabiri) Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle (Jaabiri) waa mudane ka tirsan Golaha Shacabka ee baarlamaanka 10-aad ee Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya. Mudanaha oo ku dhashay degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa isla deegaankaas ku qaatay tacliintiisa hoose/dhexe ...
Maxamuud Xayir Ibraahim
Murashax Xildhibaan – Maxamuud Xayir Ibraahim Maxamuud Xayir Ibraahim waa mudane ka tirsan barlamaanka 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kaas oo sidoo kale ah Wasiiru Dowlaha Maaliyadda ee Xukuumadda Federalka. Maxamuud Xayir waxa uu Baarlamaanka markii ugu horreysay ku soo ...
Da’uud Maxamed Cumar
Murashax Xildhibaan – Da’uud Maxamed Cumar Da’uud Maxamed Cumar waa xildhibaan ka tirsan barlamaanka 10-aad ee Jamhuuriyadda Federalka ee Soomaaliya ee 2017-2020. Da’uud waxa uu ka mid yahay mudaneyaasha doorashadii 2016 laga soo doortay Dowlad Goboleedka Puntland waana markii ugu ...
Barta Doorasho waa bar kulmineysa dhammaan macluumaadka aad uga baahan tahay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee heerarka kala duwan, sida doorashada xildhibaannada, guddoonka baarlamaannada iyo madaxweyneyaasha ee heer dawlad-goboleed ama heer federaal.
Tweets by Doorashooyinka1
© 2020 Doorashooyinka. All Rights Reserved.
Made with ❤ in Hamar